Planeta Mubairo 2019 waJavier Cercas. Wokupedzisira: Manuel Vilas | Zvazvino Zvinyorwa
Mariola Diaz-Cano Arevalo | | Makwikwi neMubairo, Vanyori, Zviitiko, Noticias
Nezuro manheru iyo Planet Mubairo 2019 zvakatorwa nemunyori Javier Fences, aine nyaya yake Terra Alta. Wokupedzisira aive Manuel Villas, game Mufaro. Isu tinoongorora trajectory yevanyori vaviri ava vanoguma zvishoma zvishoma neichi chakakosha kwazvo mubairo wegore.
1 Planet Mubairo 2019
2 Mukundi - Javier Cercas
3 Wokupedzisira - Manuel Vilas
Planet Mubairo 2019
El mubairo wepamusoro uye wakapihwa zvakanakisa mune zvemari zvemavara eSpanish (ane 601.000 euros kune anokunda uye 150.250 yemafainari) akaendeswa nezuro manheru Barcelona mune rake 68th chinyorwa. With kumwe kukakavara kana kumbodzosera mubereko pakati pemapoka makuru maviri ekudhinda yenyika yedu maererano nechinyorwa cheSpanish. Uye ndezvekuti vese vakakunda, Javier Cercas, uye wekupedzisira, Manuel Vilas, vanoenda Penguin Random House nePuraneti. Ehe iri inoda kuziva kana, pane kudaro, iyo paruzhinji kutanga kwemanheru ehondo yekutengesa pakati pehofori mbiri dzekutsikisa.
Mubairo wePlanet wanga wave Vanyori vanopa mubayiro vanotaura zvakanyanya kutengeserana uye mukurumbira, se Santiago Posteguillo gore rapera, Dolores Redondo kana Javier Sierra, uye vekupedzisira vakaita saPilar Eyre kana Mara Torres. Y gore rino zvinoita kunge anga achida kuwana zviyero pakati pezvinyorwa zvinyorwa uye iyo yekutengesa kukosha.
Mukundi - Javier Cercas
Iye Extremaduran munyori uye munyori, munyori pakati pevamwe ve Varwi veSaramisi, anga ari iye muhwina yeiyi shanduro yenyaya yake Terra Alta. Iyo inopisa chaizvo nyaya yezvino nyaya ine dingindira reiyo maitiro Katarani. Protagonist yaro ndeye Melchor Marín, aimbova akapara mhosva, inofungidzirwa segamba mukurwiswa kwejihadist muna 2017 uye anoshanda se mosso d'esquadra. Hazvigoneke zvimwe zviripo, izvo zvakare zvinoda kuziva.
Marín uchafanira kuongorora kuuraya katatu uye Cercas akatora zita rekuti pseudonym uye akachinja zita reruzivo kuti riunzwe kune mubairo. Chinangwa chako ndeche nhevedzano yedzimwe nyaya dzerudzi rwevatema uye ngano chaiyo.
Mamwe mabasa naCercas ndiwo Anatomy yechinguva kana the Mambo wemumvuri.
Wokupedzisira - Manuel Vilas
Uye wekupedzisira aive Manuel Vilas, munyori kubva kuHuesca, munyori wenhetembo uye rondedzero pamwe nerondedzero. Yaratidza Mufaro, inoita kunge iri sequel yegore rapfuura inotengesa zvakanyanya uye zvinyorwa zvinoitika izvo zvaive Ordesa, basa rehupenyu hwevanhu iro rakatoturikirwa mumitauro gumi nemaviri. Vhura Mufaro tine murondedzeri ari a munyori wepakati nepakati, anochema nekufamba kwenguva uye kufirwa nevadiwa. Naizvozvo, edza kunzvenga kuora mwoyo uye ingonyepedzera kuva fara.
Vilas akapindawo mubairo aine pseudonym, uyo wemuSweden mutambi Viveca Lindfors, uye nerimwe zita rechinyorwa: Sezvatakanga tiri.
Mamwe mabasa naVilas ari Spain, chipo chakajeka o Lou Reed aive Spanish.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Literature » Makwikwi neMubairo » Planeta Mubairo 2019 waJavier Cercas. Wokupedzisira: Manuel Vilas